‘न पार्टीको नाम न चुनाव चिन्ह उसै एमाले मेरो रे ?'
सोमबार, २३ चैत, २०७७
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले माधव पक्षको कटाक्ष गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो भनाई राख्दै माधव पक्षको कटाक्ष गरेका हुन् ।
उनले न पार्टीको नाम न चुनाव चिन्ह उसै एमाले मेरो रे भन्दै माधव समुहको कटाक्ष गरेका हुन् ।
उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्,‘न पार्टीको नाम न चुनाव चिन्ह उसै एमाले मेरो रे ? दुई महिना अघि सूर्य चिन्ह नपाए देशमा कायामत गर्ने प्रचण्ड घोषणा र दुई महिना पछि एमाले विस्तार र सुदृढ गर्ने महाझेली गुटको करामत उस्तै हुने हो। सोझै एकता गरे हुने। गाईलाई घाँस हजुर भैसीलाई कुनौरो, तल्लो बाटो हजुर हामीलाई घुमाउरो ।